भगवान शिवको उपासनामा यी गल्ती गर्दा हुन्छ निकै ठुलो हानी, के के हुन् ? – Suchana Hub
भगवान शिवको उपासनामा यी गल्ती गर्दा हुन्छ निकै ठुलो हानी, के के हुन् ?
शिवको अभिषेक गर्दा हमेशा सुन, चाँदी वा कासबाट बनेका भाडावर्तनबाट गर्नुपर्दछ । स्टील वा प्लास्टिकका भाडा शिव पुजनका क्रममा उत्तम मानिदैन । भगवान शिवलाई नरीवल चढाउन सकिने भएपनि नरीवलको पानिको अभिषेक भने गर्नुहुँदैन । भगवान शिवलाई शंख अर्पण गर्नुहुँदैन । टुक्रिएको चामल अर्थात कनिका समेत शिवलाई अर्पण गर्न बर्जित छ । कालो रंगको वस्त्र पहिरीएर शिव पुजन गर्नुहुँदैन । शिवलाई प्रसन्न पार्न गेरु वस्त्रको धारण उत्तम मानिन्छ
Previous जे माग्यो त्यहि पुरा हुने पाथिभारा देवीको यस्तो अचम्मको मन्दिर
Next कसरी रिझाउने महादेवलाई ?